घरसँगै जलेर खरानी भयाे ४ जनाकाे परिवार, राति अचानक कसरी लाग्याे अागाे ? – PathivaraOnline
Home > समाचार > घरसँगै जलेर खरानी भयाे ४ जनाकाे परिवार, राति अचानक कसरी लाग्याे अागाे ?
घरसँगै जलेर खरानी भयाे ४ जनाकाे परिवार, राति अचानक कसरी लाग्याे अागाे ?
admin November 26, 2018 समाचार	0
झापा । शिवसताक्षी नगरपालिका ७ लालझोडामा एकै परिवारका चार जनाको मृत्यु भएको छ । घरमा अचानक लागेको आगलागीका कारण मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । राती ९ बजेको समयमा उक्त आगलागी भएको हो । खनाल परिवारका सम्पूर्ण सदस्यको सुतिरहेको अवस्थामा आगलागी भएको इलाका प्रहरी कार्यालय झिल्झिलेले जानकारी दिएको छ ।
प्रहरी निरीक्षक कैलाश रार्इका अनुसार, मृत्यु हुनेमा ३६ वर्षीय लक्ष्मन खनाल, ३० वर्षीया राधिका खनाल, ४ वर्षीया सुप्रिया खनाल र ३ महिनाका टिकाराम खनाल रहेका छन् । आगलागी के कारणले भएको हो भन्ने पुष्टी भएको छैन ।
खाना खाएर सुतिसकेपछि सो घरमा आगलागी भएको र आगलागीमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको सिलिन्डर विष्फोट भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ ।
आगलागीमा परी छिमेकी घरकी ३७ वर्षीया गीता ढुङ्गेल समेत सख्त घाइते भएकाे जनाइएकाे छ । घाइते गीतालाई उपचारका लागि विराटनगरस्थित नोबेल अस्पताल लगिएको छ । काठको घरमा परिवारका सदस्य सुतेको र भुइँतलामा थ्रेसर राख्ने गरिएको थियो ।
विभिन्न नगरपालिकाबाट आएको दमकलको सहायताले आगो नियन्त्रणमा आइसकेको र अहिले घटनास्थलमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ । घटनाबारे प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिएको छ।
मध्यरातमा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट अायो यस्तो दुःखकाे खबर…. हेर्नुस भिडियो
जापानमा नेपालीको सेक्स भिडियो भाइरल – पूरा हेर्नुहोस
निर्मला पन्तको हत्या गरेको हिजो पक्राउ परेका प्रदीप रावलले स्विकारे
दिसा गर्न लागेकि थिइन्, त्यहि बेला युवक पुगेर यस्तो जे गरे…
अब पैसा पर्दैन जानुस् भनेपछि…
चितवनमा एकै घरका ४ जनालाई बगायो, एक जनाको श’व फेला बाँकीको खोजी गरिदै…
राजधानी भयो जलमग्न, तिनकुनबाट सवारी सधान नै चल्न सकेन!
कस्तो अ चम्म एकै मण्डपमा छोरी र बावु आमाले गरे धुमधाम विवाह